UNgqongqoshe Omkhulu u-Omar Abdullah Uqalisa Isikimu Sokudalulwa kweJehlum River
U-Omar wethula uhlelo lweJehlum dredging scheme
'Sisebenza Ngokusebenzela Iphrojekthi Yokuvikela Izikhukhula Ngokugcwele'
UBaramulla, uMar 24: Eqokomisa isidingo sokulungiselela ukubhekana nezinselelo nezinhlekelele, uNdunankulu, u-Omar Abdullah Saturday uthe izikhukhula bezilokhu zibanga impilo kanye nempahla eMbusweni. Uveze ukuthi lesi simo semijikelezo yezikhukhula safakazela uMbuso ngemuva kwezikhathi ezijwayelekile zokuthi bonke abantu bagxile kakhulu kwizinyathelo ezidingekayo.
"Kufanele sizilungiselele ngokugcwele futhi siqaphele izinsongo zezikhukhula ezinkulu ukuze singabanjwa singazazi ngesikhathi eziphuthumayo", wengeza ngenkathi ekhuluma nomsebenzi ngemuva kokuvula uhlelo lweRs 21.38 Crore Dredging Scheme eJati, eDuabgah naseNangli esifundeni saseBaramulla namuhla.
U-Omar Abdullah uthe uhulumeni usebenzela umsebenzi omkhulu wokuvikela izikhukhula ukukhulisa umthamo wemifula emikhulu, uqinise izikhwebu, uvuselele iziteshi zezikhukhula futhi wethule nezindlela zesikhathi eside nesikhashana wengeza ukuthi umsebenzi wokudonsela amanzi emfuleni iJehlum uyingxenye isu leli.
“Yize sizizwa sanelisekile ngokwakha amabhuloho, imigwaqo, izikole, amakolishi, ukufakwa kwamanzi kanye nezinye izinhlelo ezifana nalezi zindawo zisetshenziswa kakhulu ngumphakathi kepha lapho sakha ukuvikeleka kwezikhukhula njengezindawo sithandaza kuNkulunkulu ukuze singabi baphoqekile ukuthi basebenzise lezi zinyathelo ”, uthe bagcizelela ukulungela nokuqwashisa abaphathi nabantu ukuthi babhekane nezinselelo zemvelo.
UNdunankulu wathi ukubaluleka kokudonswa kabusha komfula iJehlum kungabonakala ngokusobala ukuthi iDredger yokuqala yamiswa nguNdunankulu waseNdiya eBaramulla eminyakeni eyi-60 emuva.
Kwakungesikhathi sokuphatha kukaSheikh Muhammad Abdullah lapho uDredger wokuqala amiswa khona nguNdunankulu wangaleso sikhathi waseNdiya uJawahar Lal Nehru futhi umsebenzi wokumba kabusha waqhubeka kusukela ngo-1959 kuya ku-1986. Lolu hlelo seluvuselelwe nguNgqongqoshe Omkhulu futhi namuhla phambi kukaNgqongqoshe kwe-PHE, Irrigation and Flood Control, uTaj Mohi-ud-Din noNgqongqoshe Wezwe We-R & B, uJavid Ahmad Dar.
U-Omar Abdullah uthe uhulumeni wobumbano kusukela ngosuku aqala ngalo ukusebenza wagxila kakhulu ekuthuthukisweni koMbuso nasekukulungiseleleni ukubhekana nezinhlekelele nokusatshiswa kuye kwaba nokunye kokukhathazeka okubalulekile. Uncome uTaj Mohi-ud-Din ngokufaka amandla amasha eMnyangweni Wezokulawulwa Kwezamanzi, i-Irrigation kanye neZikhukhula futhi wengeza ngokuthi uNgqongqoshe akagcinanga ngokuvuselela izikimu ezindala nezingasebenzi kepha wethule okusha kulo mkhakha.
Ekhuluma ngentuthuko yedolobha laseBaramulla, u-Omar Abdullah uthe ucele uKhomishani Wezentuthuko Yesifunda ukuthi alungiselele imigwaqo futhi akhe namaphrojekthi okuthuthuka okuphelele kwedolobha laseBaramulla agxile ekuthuthukiseni kanye nasekuthuthukiseni idolobha elidala.
“Ukutholakala kwezimali bekungeke kube yisithiyo kulokhu”, uthe futhi wengeza ngokuthi uhulumeni uzimisele ukwenza ngcono inqubo yentuthuko edolobheni. Ukukhombisa ukungeneliseki ngokushiywa kweJati Bridge yize kusetshenziswe imali engango-Rs. I-2 isingene kuyo, uNgqongqoshe Omkhulu wathi ucele umnyango othintekayo ukuthi ulungiselele iphrojekthi yokuphothula leli bhuloho.
Ekhuluma kulo mcimbi, uNgqongqoshe we-PHE, Irrigation kanye neZikhukhula, uTaj Mohi-ud-Din uchaze kabanzi ngeSikimu Sokuchibiyela nezinzuzo zako zokubhekana nokusongelwa kwezikhukhula.
Ungqongqoshe udumise uHulumeni wase-UPA ngokunikela ngezimali zesikimu futhi uncome iqhaza elibambe iqhaza likaNgqongqoshe Omkhulu lokuthola imali kulesi sikhungo. Ubuye futhi wanikeza imininingwane ngezinye izindlela zokuvikela izikhukhula ezikhona njengamanje kwipayipi futhi esezethule eMkhandlwini.
Uthe imisebenzi yokudiliza ukusebenza kweDredges ezimbili izoqala ukusukela namhlanje ukuze kususwe imishini yokudonsa yama-14 lakh cum kanye nokufakwa emfuleni uJehlum kusuka eNangli kuze kuyofika eBaramulla ngenani eliphelele lama-44 lakh cum amana akhonjwe endaweni.
"Lokhu kuzonyusa umthamo wesiteshi esiphumayo usuka eNyli uye eGantamulla uye kuma-cNecX we-35000 ngokumelene namandla akhona we-28000 cusecs. Ukucekelwa phansi okufana nesihlabathi nokhonkolo kuzoveza imali enkulu emnyangweni, ”engeza.
UNdunankulu uphinde watshala isithombo seChinar eDuabgah.
Isishayamthetho uMuhammad Ashraf Ganai, uNobhala weKhomishini uPHE, BD Sharma, Unjiniyela Omkhulu, Irrigation kanye noLawulo lweZikhukhula, uKashmir, uKhomishani Wezentuthuko Yesifunda uBaramulla kanye nezinye izikhulu babekhona kulo mcimbi.